Sabab DM? | DM words
Maxaa loogu baahan yahay DM?
Erayada DM (Qaamuuska 1000 erey) waxaa loo sameeyay in lagu xaliyo arimo badan oo ku saabsan soogalootiga dowladaha, shirkadaha wax ka qabta shaqaalaha ajaanibta ah iyo baahiyaha aasaasiga ah ee nolol maalmeedka dhamaan kooxaha soogalootiga ah.
Arimaha soo galootiga
Dadku waxay la kulmaan caqabado nolol maalmeedka iyo u guurista dibadda waxay caqabad dhab ah ku noqon kartaa qaar iyaga ka mid ah maadaama ay saameyn ku yeelaneyso qaab nololeedkooda iyo jiritaankooda. Barashada luuqadu waa talaabada ugu weyn ee lagu fahmayo muhiimada is dhex galka bulshada loo socdo, sidaa darteed qaamuuskeenu wuxuu ka caawin doonaa kooxdan dadka ah inay si fiican u fahmaan una xaliyaan arimaha ay wajahayaan inta lagu gudajiro howlaha isdhexgalka oo dhan.
Caadi ahaan, sababta ugu weyn ee dibedda loogu aadayo ayaa ah in la helo shaqo iyo shirkadaha la macaamilaya shaqaalaha ajaanibta ah waxay noqon kartaa caqabad dhab ah in lala xiriiro iyaga. Waxaan markaa isku dayeynaa inaan bixinno talooyinka ugu fiican ee helitaanka xalka fudud iyo fududeynta nolosha qof walba.
Waxaan diyaarinay nidaam hufan oo gacan ka geysanaya dhiirigelinta qof walba geeddi-socodkan dheer ee barashada luqad cusub iyo si loo horumariyo xirfadahooda isgaarsiinta oo si fudud loogu daboolo baahidooda. Waxaan ka rajeyneynaa qof walba inuu barto ugu yaraan aqoonta aasaasiga ah ee luqadda la doortay.
Kooxaha Bartilmaameedka ah
Sida aan kor ku soo sheegnay, kooxaha ugu muhiimsan ee aan bartilmaameedsanay waa soogalootiga u guuraya dibedda si ay ugu noolaadaan, u shaqeeyaan, wax u bartaan ama in ka badan u noqdaan. Waxaan aaminsanahay in nidaamkeena uu qof walba siinayo fursado badan waana ku cadeyn karnaa anagoo tusaale ka qaadaneyna cilmi baaristayada.
Iyadoo lagu saleynayo cilmi baaristeenna, ajaanib badan oo u guuraya dibedda si ay uga shaqeeyaan ama wax u bartaan iskama dayaan inay bartaan luqadda waddanka martida loo yahay maxaa yeelay waxay ku guuleystaan ​​inay ku wada xiriiraan Ingiriisiga maadaama ay runti tahay luqadda caadiga ah ee qof walba adeegsado. Luuqada Ingiriisiga ayaa waxtar badan yeelan karta laakiin dayacaada luqada wadanka aad martida u tahay waxay caqabad dhab ah ku noqon kartaa is dhexgalka bulshada ereyada DM-na waxay diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan inaad tan ka gudubto.
Tilmaamaha iyo tirakoobka
Qalabkeenu wuxuu si fudud u helayaa baahida saxda ah. Waxaan bixinnaa nuxur ku habboon qof walba waxaanna siinnaa ereyada iyo weedhaha ugu waxtarka badan si aan uga caawinno qof walba inuu noqdo mid kalsooni badan marka uu la macaamilayo dadka kale. Isticmaalayaasha waxay ka heli karaan waxyaabaha aad u fudud dhammaan aaladaha. Raadinta ayaa ah mid aad u fudud in la helo dhammaan waxyaabaha ku jira qasabno yar gudahood.
Qaamuusku wuxuu leeyahay 1000 erey iyo 300 oo jumladood oo lagu daray 33 cutub oo loo qaybiyay 7 qaybood. Xilligan, ereyada DM waxaa loo tarjumay 24 luqadood. Waad u beddeli kartaa mid ka mid ah kuwaas oo aad isku dari kartaa sida aad rabto, dadka isticmaala waxay ku heli karaan macluumaad afkooda ku jira iyo sidoo kale luuqad ay ku muujiyaan.
Erayada DM waxaa loo sameeyaa dadka aan aqoon u lahayn haba yaraatee luuqad kale iyo waliba kuwa horey u lahaa xoogaa aqoon aasaasi ah oo raadinaya inay waxbadan bartaan.
Adeegyo kale oo badan oo jira ayaa loo sameeyaa dadka leh aqoon waxbarasho oo horeyba u fahmay Ingiriisiga, qalabkooda su'aalaha la weyddiisana waa dhib badan yihiin maxaa yeelay waxay ku jahwareerayaan kuwa aan haysan aqoonta aasaasiga ah. Erayada DM waxaa loo fududeeyay inuu isticmaalo qof walba.